Root လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ ဘာ့ကြောင့် Root ဖေါက်ကြသလဲ ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
Root လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ ဘာ့ကြောင့် Root ဖေါက်ကြသလဲ
9:08:00 AM Root, Tutorial No comments
ဒီနေ့တော့ Android Rooting Guide နဲ့ပတ်သက်ပြီး
လိုက်ရှာကြည့်ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီမှာ ဘာရလာသလဲဆိုတော့
အပေါ်ကခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ စပါယ်ရှယ် လမ်းညွှန်နည်းလေးပါ
အားလုံးအတွက် တစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှ ဝေလိုက်ပါတယ်။
Official ဆိုက်တွေမှာတော့ အင်္ဂလိပ်လို အပြည့်အစုံဖေါ်ပြထားကြတာ
တော့ တွေ့ပါတယ် ကျနော် ရမ်းသန်းပြီး ဘာသာပြန်ကြည့်ပါသေးတယ်
သိပ်အဆင်မပြေတာနဲ့ ဒီကောင်းစဉ်လေးကို အောက်သက်သက်လေးနဲ့
တင်ပေးချင်ပေမယ့် ကြံ့ကြာနေခဲ့တာပါ အခုတော့ တွေ့ပြီပေါ့ဗျာ
Root လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ ဘာ့ကြောင့် Root ဖေါက်ကြသလဲ ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်လေးကို အစ်ကို Than Minn Naing က အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်
ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ ဘယ်လောက်ထိ ပြီးပြည့်စုံသလဲဆိုတာကို
ကျနော် မပြောလိုပါ အောက်မှာသာ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါလို့
Root ဖေါက်နည်း လမ်းညွှန်
သင်ဒီ Post ကိုဖတ်နေပြီဆိုတာနဲ့သင် ဟာ Root ဖေါက်ဖူးသူ ဒါမှမဟုပ် Root ဖေါက်ရန်တွေးတောကြံစည်နေသူဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။
ကျနော့အမြင်ပေါ့ ကျနော်တို့ ဟာ Root ဖေါက်ဖို့ စဉ်းတောင်မစဉ်းစားခဲ့ ဖူးကြပေမဲ့ ကျနော်တို့ တွေရဲ့အတွေးစိတ်ကူးတွေမှာ Root ဖေါက်ဖို့ ရန်စိတ်ညွတ်နေကြသူများဆိုတာကိုတော့
ငြင်းနိုင်မယ်မထင်ဘူး ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ရဲ့ ဖုန်း ထိခိုက်ပြက်စီးမှာကိုတော့ ထဲ့မစဉ်းစားမိခဲ့ကြဘူး။
ကျနော့ရီရွယ်ချက်ကတော့ လမ်းကြောင်းတစ်ခု ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုကနေ
ယိမ်းယိုင်မသွားစေချင်ဘူး။ လုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်လက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်စေချင်တယ် ဒီအတွက်လည်း
ကျနော့ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့ ကြုံ တွေ ဗဟုသုတ တွေကိုမျှဝေပေးချင်တယ်။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဆုံ့ ဖြတ်ချက်တွေကို ကျနော့ ဗဟုသုတတွေနဲ့အထောက်ကူပြု ပေးချင်လို့ 
ဒီ Post ကိုကြိုး စားရေးတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖေါက်ခြင်းအလုပ်ကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ဆက်ရှင်းမပြသေးခင် Root ဖေါက်ခြင်းရဲ့ အယူအဆ တွေကို မိတ်ဆက်သဘောအရင် ရှင်းပြချင်သေးတယ်။
Root မဖေါက်သေးခင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ အထောင်ထားဖြစ်အောင်ဖတ်သင့် သည်များ Root ဖေါက်ခြင်း၏ အကြိုးကျေးဇူးများ Root ဖေါက်ပြီးသွားပါက လုပ်ဆောင်စရာများ ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Root ဖေါက်ခြင်းဖြစ် ဘာအကျိုးကျေးဇူး ရနိုင်သလဲ
အထက်မှာရှင်းပြခဲ့သလို Root ဖေါက်တယ်ဆိုတာ ဖုန်းတစ်လုံးကို ထိမ်းချုပ်ဖို့ ရန် အဆုံးစွန်းသောအဆင့်ထိ အသုံးပြု သူ ကို ပေးစွမ်းနိုင်တာ မျိုးပါ။
သင့်ဖိုန်းထဲ သင်အလိုရှိသလို ဝင်ရောက်လို့မရတဲ့အခါ ခဏလောက်စဉ်းစားပါ
ပြင်ဖို့ လိုပြီ File တွေဖျက်ရမလား Program တွေကိုကွန်ပျူတာ ကနေဖျက်ပြစ်ရမလား ဦးနှောက်စားစရာဖြစ်လာပါတယ်။
မှန်ပါတယ် အကယ်၍ သင့်ကအမှုမဲ့ အမှတ်မဲသာ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် အချို့ အရာတွေဗြောင်းဆန်ကုန် မှာဖြစ်ပါတယ် သို့ သော်လည်း သင့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ အခွင့်ရေးကတော့ Superuser နဲ့ သင့် PC ရဲ့ Admin သင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးဖို့သင် ငွေပေးရ ပါတော့မယ်။
အထက်မှာပြထားပေးတဲ့ ပုံထဲက Mobile ODIN Pro ကို Google Play Store ကယူသုံးရင်ငွေပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံမှာပြထားတဲ့ ROM Toolbox Pro ဟာလည်းငွေပေးသွင်းရင် သုံးလို့ ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို သင် လိုသလိုပြု ပြင်အသုံးပြု ဖို့သင့် ဥာဏ်မမှီဘူးဆိုရင် Root ဖေါက်လိုပ်ခြင်းဖြစ် သင့်စိတ်ကြို က် ပြု ပြင်မိုးမံလို့ ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်ဖို့ ရန် စိတ်မပျက်ပါနဲ့သင့်ဖုန်းထဲက Play Store ကနေ လိုအပ်တာတွေကို Download လုပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါတယ် အကယ်၍ သင့်ဖုန်းထဲမှာ Play Store မရှိခဲ့ရင် Google မှာ Update လုပ်ပြီး ယူနိုင်ပါတယ်။
သင့် Root ဖေါက်လိုက်တဲ့နောက် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း သင့်ဖုန်းရဲ့ Custom ROM မှတဆင့် သင် Update လုပ်ဖို့ ရရှိမှာပါ။ Custom ROM အကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင် ROM တော်တော်များများမှာ Tether ဆိုတဲ့ရွေးပိုင်ခွင့်ပါဝင်နေပါတယ် Tether ဆိုတာကိုနားလယ်လွယ်အောင် ပြောပြရရင် ကြိုးရှည်ရှည်ဖြင့် လံ ထားပြေးခြင်း မျှေားပေးထားခြင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Root ဖေါက်ခြင်ရင်ဖေါက်လို့ ရအောင်လုပ်ထားပေးတဲ့ သေဘောပါ။
ဒါဟာတကယ်တော့ အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ် ဘာကြောင့် ခုလို Root ဖေါက်လို
့ရအောင် ဦးတည်ပေးထားရတာလဲ။ သင့်ရဲ့ SD Card ပေါ်ကို System တွေ Back Up လုပ်သိမ်းယူဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလဲပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ရဲ့ ပြန်ယူပြီးသုံးလို့ ရအောင် လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ အပြင် သင့်ဖုန်းရဲ့ Boot Animations ကိုသင် ပြု ပြင်ပေးလို့ ရပါတယ်။ နည်းပညာ သို့ မဟုပ် Code နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အတွေ့ ကြုံ တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
အမှန်ကတော့ သင် Root ဖေါက်ဖို့ ဦးတည်နေတာဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်
ခွင့်မပြု ထားတာတွေကိုထိမ်းချုပ်လုပ်ကိုင်ချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း
သင့်ကို ဝါသနာအိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ရှာဖွေလုပ်
ဆောင်မှု့ တွေနဲ့ တွန်းပို့ ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်အနေနဲ့ ကတော့ Android v4.2.2 အထိကို Root ဖေါက်လို့ ရတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ Post တွေမှာလည်းရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် သို့ သော်လည်း ဖုန်းအသစ်တွေကို Software အသစ်တွေကို စမ်းသုံးကြည့်ခြင်တာကစလို့Android v4.3 ကို Root ဖေါက်လို့ မရတာက စပြီးခုလို ရေဆုံးမြေဆုံး
Root ဖေါက်နည်းအသစ်တွေကို ရှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုလိုရှာဖွေနေရင်းတွေ့ ရှိလာရတာတွေက Custom ROM ကိုကိုယ်တိုင်ထဲ့နိုင်ဖို့ 
Kernel Version တွေကိုပြောင်းလည်းတပ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာတွေကို မြင်လာပါတယ်။
အောက်ပုံမှာပြထားပေးတဲ့ ROM Manager ကတော့ Google Play Store မှာ Free ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Root အသုံးပြု သူအနေနဲ့မရှိမဖြစ်ထားသင့်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
Root ဖေါက်လိုက်ခြင်းဖြစ် ဘာပြသနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ
ကောင်းပြီ ဒီ Post ကိုမူရင်းရေးသားသူရဲ့ အာဘော်တွေကို ပြန်ဆို ရေးသားမှု မပြုတော့ပါဘူး မူရင်းကိုဖတ်လိုပါက အောက်မှာ အညွှန်းကိုပေးထားပါတယ် သွားရောက်လေ့လာပါ နောက်တစ်ခုက ကျနော် ဒီဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ရာမှာ တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုထားတာ မဟုပ်ဘဲ ကျနော့လက်တွေ့တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး Post တင်လိုက်တာပါ Root ဖေါက် လိုက်ခြင်းအတွက် စက်ရုံထုပ် အာမခံချက် Warranty ပျက်ပါတယ်။
Factory Reset ချပေးတာများသွားရင် Brick ဖြစ်ပါတယ် Brick ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ
အုပ်နီခဲ မဟုပ်ပါဘူး Power ပိတ်သွားပြီး ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါမှ Power ပြန်မတက်တော့ပါဘူး
Full Format ပြန်ချပေးနိုင်မှ ပြန်ကောင်းပါတယ် ကျနော်တို့မြန်မာစာရေးလို
သူတွေအတွက်က Root မဖေါက်မနေဖေါက်ကြရတာဆိုတော့ဒါကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
သို့ သော်လည်း ဖုန်းတိုင်း Root ဖေါက်စရာမလိုပါဘူး Samsung ဖုန်းတော်တော်များများနဲ့ 
Font Style ပါသောဖုန်းတွေဟာ Root ဖေါက်စရာ မလိုတာကိုသိထားဖို့ လိုပါတယ်။
Root မဖေါက်ခင်မှာ စဉ်းစားရမည့် အချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်စရာများ
အထက်မှာ ရှင်းပြခဲ့တာတွေကြောင့် Root ဆိုတာဘာလဲ ဘာတွေဆိုးကြိုးကောင်းကြိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိလောက်ပြီပေါ့ ခု Root မဖေါက်ခင်
Root ဖေါက်တပ်ခြင်ပြီဆိုရင် Google ဟာ မရှိမဖြစ် မိတ်ဆွေကောင်း ပါဘဲ ၊
သင့် စပြီး Root ဖေါက် တော့မှာဆိုရင် ဖုန်း အဟောင်းကို အရင် သုံးပြုသင့်တယ်
ပြီးတော့ စာတွေများများဖတ်ဖို့ လိုတယ် ဖတ်နိုင်သမျှများများဖတ်လေ ကောင်းလေပါဘဲ
The More You Read The More You Know ဆိုသလိုပေါ့ များများဖတ်လေ များများသိလေပေါ့။
နာမည်ရထားပြီးဖြစ်တဲ့ Web Site တွေကိုမှတ်မှတ်သားသား သိမ်းဆည်းထားတပ်ဖို့ လိုပါတယ် မမျှော်လင့်ဘဲတွေမိတဲ့ Web Site တွေထဲ မှာ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ အကြောင်းတွေပါလာရင် မိမိ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ နားမလည်တာတွေပါလာရင် ပြန်လည်ဖတ်လို့ ရအောင် သေချာသိမ်းထားပါ သင် ဟာ သင့်ကိုသင် ပြန်လည်သင်ကြားပေးဖို့မရှိမဖြစ် လူ တစ်ယောက် ဆိုတာကို သဘောပေါက်ထားပါ။
XDA Developers Web Site ဟာ သင်သိလိုတာတွေကို အမေး အဖြေ မှာဝင်ရောက်ဖတ်လို့ ရနိုင်သလို သင် မေးချင်တာတွေကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်၊ သင်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ ဖြေထားပြီးသား တွေလည်း ရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ ခြိမ်းခြောက်သလိုဖြစ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေ ပါမှာတော့ ကြိမ်းသေပါဘဲ ဒါပေမဲ့ သင်လိုခြင်တဲ့ ဗဟုသုတအတွက် ဝင်ရောက်လေ့လာမေးမြန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာများများဖတ်ဖို့ ကျနော်သတိပေးထားတယ်နော် ဒီလောက်ရောက် လာပြီဆိုတော့
သင် ဟာ စာကိုလိုအပ်သည့် အလျှောက် စာဖတ်သူဆိုတာကို ကျနော် တွေ့ ရပါတယ် ၊
Root ဖေါက်နည်းအကြောင်းတွေရေးထားတဲ့ ဝက်ဆိုဒ်တွေထဲ ဝင်ခဲ့တာလည် အပ်ကြောင်းထပ်နေလောက်ရောပေါ့။
သင့်ရဲ့ဖုန်း ကို Root ဖေါက်ရာမှာ သင်စိတ်ကျေနပ်မှု့ ရတဲ့အထိ မျှော်လင့်ထားရမှာတွေက
တကယ်အဓိက ကျပါတယ်။ Data တွေကိုကြို တင်သိမ်းစည်းတဲ့ အစီစဉ်တွေလုပ်ရပါမယ်
သင် Root ဖေါက်တာမအောင်မြင်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ် သလဲဆိုတာရယ်
လုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့Hangs ဖြစ်သွားရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်မသိဘူးဆိုရင် သင်စာဖတ်ထားတာတွေဟာ မလုံလောက်သေးပါဘူး။
ဒီတော့သင့်ရဲ့ ROM/OS ကို Backup လုပ်ထားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
ဒါ့အပြင် Factory Setting မှာ အမှားရွင်းဖြစ် သွားတာမျိုး သင့် Backup လုပ်ထားခဲ့တဲ့
File နဲ့ဘယ်လိုကောင်းအောင် ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကို သေချာသိထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဖုန်းတော်တော်များများမှာ File-safe ဆိုတာရှိပါတယ် ဒီအထဲကိုဝင်ပြီး ပြန်လည် Backup လုပ်ပေးရတာတွေကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကို မသိရင်တော့ Backup လုပ်ထားတာဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Backup လုပ်ထားပြီးပြိ ဆိုတာနဲ့မပြီးသေးပါဘူး သင်လုပ်ထားတဲ့ Backup File ဟာကောင်းမွန်စွာ အလုပ် လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင်ဆိုတာကို အရင်စမ်းသပ်ဖို့ လိုပါတယ် သင်လုပ်ထားတဲ့ Backup ဟာကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ရင် သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ့ ?
ဒါဟာ အသဲခိုက်လောက်တဲ့ အချိန်ပါဘဲ သင့်အနေနဲ့ စာတ်ခြင်းမှာ
အချိန်ကိုမြှု တ်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Root ဖေါက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ
သင့်ဖုန်းကို Root ဖေါက်ဖို့ ကြိုးစားရှာဖွေဖတ်ရှု့ နေတဲ့အခါမှာ သင် ဖတ်နေတဲ့ Post တွေရဲ့နေ့ 
စွဲတွေကို စစ်ဆေးလေ့လာဖို့ လည်းလိုပါတယ် ဖုန်းတွေရဲ့ Model ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကြောင့် နည်းပညာတိုးတက်ပြောင်းလည်းနေတာကြောင့် သင် ကြိုးစားရှာဖွေဖတ်နေတာတွေ အသုံးမတဲ့ဖြစ်မှာကို သတိပြုဖို့ လိုပါတယ် ဒါကြောင့် နောင့်ဆုံးအဆင့်မြင့် နည်းပညာတွေ ကိုတင်ပြထားတဲ့
Post တွေဖတ်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သင့်ဖတ်နေတဲ့ Post တွေကိုအထူး ဂရုပြု ဖတ်ဖို့ အထူးအရေးကြီး ပါတယ် တစ်ဝက်တပြက်ဖတ်ထားတဲ့ နည်းပညာတွေကို ရန်းသန်းပြီးလက်မခံမိဖို့ လိုပါတယ်။ Post ကို အဆင့်ဆင့် သေချာနားလယ်အောင် ဖတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အလျှင်စလိုမနိုင်ပါနဲ့ဒါဟာပြိုင်ပွဲတစ်ရပ် မဟုပ်ပါဘူး စိတ်အားထက် သန်မှု နဲ့ ကြိုးစားတဲ့အခါ အောင်မြင်မှုကမြေကြီး လက်ခတ်မလွဲရနို င်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အချိန်ပေးထားနိုင်ဘို့ တော့လိုပါတယ် လုပ်ရမဲ့ အဆင့်တဆင့် ခြင်းစီကို ဖြေးဖြေးခြင်းလုပ်ပါ စာကိုဂရုတစိုက် သေချာဖတ်ပါ သင်ဖတ်တဲ့ Post တွေမှာ သရုပ်ပြ ပုံတွေပါရင် သင့်အတွက် အထောက်ကူပိုဖြစ်စေပါတယ်။
Root ဖေါက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကြို တင်ပြင်ဆင်မှု့တွေလုပ်ပါ သင်ဖတ်နေတဲ့
Post တွေထဲက အခြားလူများရေးထားတဲ့ Comment တွေကိုလည်းဖတ်ပေးပါ၊
ဒါဟာဆိုရင် ကိုယ်လို ပညာရှာသူများ ရဲ့ အတွေ့ အကြို့ဗဟုသုတကို
ရယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီလို ဟိုဖတ် ဒီဖတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်
သင့်အောင်မြင်မှု့ အတွက် သင်ကိုသင် ယုံကြည်မှု့ တွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Forum တွေ Blog တွေထဲဝင်ပြီး မသိတာကို မေးမြန်းပါ အတွေ့ ကြို ဗဟုသုတ ရှာနေကြသူ အချင်းချင်း အပြန်မလှန်ကူညီပေးကြတာဟာ Android Community ရဲ့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Root ဖေါက်ပြီးရင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ
အကယ်၍ သင်ဘာ့ကြောင့် Root ဖေါက်ရတယ်ဆိုတာကို ရေရေရာရာ မသိရင် သင်အနေနဲ့ 
Root မဖေါက်သင့်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်အထက်မှာ ရှင်းပြထားတာတွေကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ပါ၊
Root ဖေါက်ခြင်းကို စမ်းသပ်ပြုလုပ်ဖို့ ရန် သင်ဘာကြောင့် Root ဖေါက်ရတယ်ဆိုတာကို သင်ကိုယ်တိုင်သိအောင် သေသေချာချာအရင်လုပ်ပါ။
ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမှာက Backup File ဖန်တည်းထားပါ၊ Root ဖေါက်ထားတဲ့ဖုန်းမှန်သမျှဟာ
ဖုန်းရဲ့ System ကိုလိုသလိုကောင်းမွန်အောင် ပြု ပြင်မိုးမံထားတာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီတော့ ဒီ System ထဲကိုဝင်ရမဲ့လမ်းကြောင်းကို သိအောင်လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ် ပြီးရင် ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို ရင်းနှီးအောင် လေ့ကျင့်အသုံး ပြုထားပါ၊ Backup File ကိုလည်းသုံးရမရစစ်ဆေးထားပါ။
သင် Root မဖေါက်ခင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ Backup File ဟာသင် Root ဖေါက်ပြီးသွားတဲ့အခါ
သုံးလို့ မရပါဘူး အဲဒီ Backup File အဟောင်းဟာ သင့်အနေနဲ့UnRoot ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြန်သုံးနိုင်သလို Root ဖေါက်ရင်း မအောင်မြင်တဲ့အခါမှာ
သင့်ဖုန်းကို မူလအနေထားအတိုင်း ရှိနေအောင်လုပ်တဲ့အခါသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Root ဖေါက်ပြီးမှ ထပ်လုပ်တဲ့ Backup ကတော့ Root ဖေါက်ပြီးမှလိုအပ်လာခဲ့ရင်သုံး ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ရရင် ရသလို သင့်ရဲ့ Root ဖေါက်ထားတဲ့ System အသစ်ထဲကို ဘယ်လိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုရမယ်ဆိုတာကို သေချာသိအောင် လုပ်ထားပါ၊ ဖုန်းဖွင့်တာ
ပိတ်တာက အစ သိအောင်လုပ်ထားပါ။ အချို့ ဖုန်းတွေမှာ ဒီလိုဝင်ရောက်ဖို့ အတွက်
ဖုန်းကို Laptop တို့PC တို့ နဲ့ ချိပ်တဲ့အခါ Download Mode ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။
ဒီ Download Mode ဟာ Laptop တို့PC တို့ ချိပ်တဲ့အခါမှာ OS ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်
ပြု လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ တနေ့ သင် မဖြစ်မနေသုံးရတဲ့အခါ
သိအောင်လို့ ကြို အသိပေးထားတာပါ။
ဖုန်းတွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမတူညီကြပါဘူး သင် ဖုန်းကို Root ဖေါက်ပြီးသွားတဲ့အခါ နောက်ထပ်ဘာတွေထပ်လုပ်လို့ ရသေး လဲဆိုတာသိအောင် စာတွေထပ်ဖတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်၊ အထက်မှာရှင်းပြခဲ့သလို သင့် ဖုန်းထဲမှာ ROM နဲ့Kernel အသစ်ထဲ့ထားတာမို့ဘက်ထရီကို တာရှည်ခံစေတာမျိုးစတဲ့ အကြိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Root ဖေါက်ထားတဲ့ ဖုန်းနဲ့ဘာဘဲလုပ်လုပ် အလျှင်စလိုမလုပ်ဖို့ သတိထားပါ၊
သင်ဟာသင့်ရဲ့ဖုန်းကို အပြည့်ဝ ကိုင်တွယ်ထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်ရေးရှိနေပါပြီ၊
မတော်တဆ နမော်နမဲ့ နိုင်တဲ့ အမှားတွေအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တာကို သတိပြု ပါ။
ဗဟုသုတတွေကို ကျနော်လို့ဖြန့် ဝေပါ သင် သင်ယူလေ့လာထားသမျှကို
အခြားလူတွေကို ကူညီပေးဖို့ ကြို့ စားပါ။
ဒီ Post ဟာစာဖတ်သူတွေကို Root ဖေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတကို အထိုက်အလျှောက် အထောင်ကူပြုမယ်လို့ တော့ယုံကြည်ပါတယ်၊ သင် Root ဖေါက်တာ မဖေါက်တာကတော့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်၊ Root ဖေါက်ခြင်းကြောင့် ကောင်းကျိုး များစွာရှိသလို မအောင်မြင်ခဲ့ရင် သင့်ဖုန်း ပျက်စီးနိုင်တာ သင်ကိုတိုင်အသိနိုင်ဆုံးပါ။
သင့် ဖုန်းပျက်စီးသွားပါက သင် သာလျှင် တရခံ ဖြစ်ပါသည်။
Root ဖေါက်ခြင်းဖြင့်ပျော်ရွင်ကြည်နူးနိုင်ပါစေ။
PDF-အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားလိုတဲ့ ညီအကိုတွေကတော့
Credit Than Minn Naing
TMunifi ရဲ့ wireless passw၀rd ပြောင်းနည်း
Myanmar Thingyan Songs.Apk
Facebook မှာတင်တဲ့ video ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းမယ်
300 (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Outcast (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Avatar (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Combustion (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Live Free or Die Hard-4 ( မြန်မာစာတန်းထိုး)
The Day After Tomorrow (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
Huawei Ascend G6 G6-U10, G6-U00, G6-L11 ဖုန်းများက...
Samsung Galaxy Grand prime SM-G530H Official Firmw...
Note2N7100 ဖုန်းများကို Android 4.4.2 KitKat Off...
Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011) မြန်မာ...
Samsung Galaxy S6 Apps APK & Wallpapers များနဲ့ လန...
Samsung Galaxy Note3SM-N900 ကို နောက်ဆုံးထွက် Lo...
Tom And Jerry The Lost Dragon (2014)
Huawei G6-U10 ဖုန်းများကို Root အလွယ်လုပ်မယ် (ကွန်...
Samsung Galaxy Mega2SM-G750F ဗားရှင်း 4.4.4 ဖုန်...
Despicable Me2(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Despicable Me (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Phone or tablet များကို တစ်ချက်တည်းနှိပ်ရုံနဲ့ Roo...
Samsung Galaxy Note2SHV-E250K ဖုန်းဗားရှင်း 4.4....
Office documents ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Macro Virus အ...
Nexus4or Nexus5ဖုန်း ဗားရှင်း 4.4.4 အထက် အားလံ...
SM-G530H ​Android Version 4.4.4 ဖုန်းများကို Root ...
Internet Download Manager 6.23build 6
မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆို 4.2.2 အထက် ဖုန်းအားလုံးကို One...
Now You See Me (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Scooby-Doo! WrestleMania Mystery (2014) မြန်မာစာတန...
The Call (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Galaxy S4 (GT-I9506) official I9506XXUDOA6 Android...
Samsung Galaxy S6 Battery / Galaxy S6 Edge ဖုန်းတေ...
Video Converter Android + key full version (Androi...
English premier league winners list
သင့်ဖုန်းအတွက် Launcher တွေထဲမှ အကောင်းဆိုတာကို ရေ...
Galaxy A5 A500F Android 4.4.4 ဗားရှင်းအားလုံးကို အ...
ဖုန်း System တစ်ခုလုံးကို Backup & Restore လုပ်ဖို...
ဖုန်း System တစ်ခုလုံးကို Backup and Restore ဆိုင်...
Samsung Galaxy Note GT- N7000 သမားတွေအတွက် 4.4.4 n...
Alice in Wonderland (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Samsung Galaxy S5 SM-G900H 5.0 Lollipop Official F...
ဖုန်းမှာ Recovery Mode မ၀င်တတ်တဲ့ သူများအတွက် ဖုန်...
Mere Dad Ki Maruti (2013)မြန်မာစာတန်းထိုး
The Wolverine (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Evil: Retribution (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Date and Switch (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Samsung Galaxy Note3SM-N9005 Official Android 5....
Ramaiya Vastavaiya (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
3 Days to Kill (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Kingsman- The Secret Service (2015)
အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Samsung Galaxy S6 & Galaxy S6 ...
John Wick (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Wicked Blood (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mud (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Deja Vu (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
No One Lives (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Angels in Stardust (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Bring Me the Head of the Machine Gun Woman(2012)ြ...
Darr @ the Mall (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Asus Fonepad7Model 170CG ဖုန်း 4.4.2 များကို One...
Diamond Ruff ( 2015 )
Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure (2013) မြ...
HTC One Mini - m4 ဖုန်းအမျိုးအစားတွေအတွက် 5.0.2 ...
Brave (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Odin ကို အသုံးပြုပြီး Samsung ဖုန်း/Tablet အားလုံး...
Samsung Galaxy ဖုန်း Tablet အားလုံးကို Recovery Mo...
Hotel Transylvania (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Lenovo Stock Rom ( Original firmware ) တွေကိုစုစည...
ဖုန်း Brands အားလုံးအတွက် Official MIUI Firmware မ...
Facebook အကောင့်ကို ဖျက်ချင်ရင်..
Oh My God ( 2012 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Thor (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
7500 (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး